Nin qarax waday oo lagu qabtay Magaalada Dhuusamareeb (SAWIRRO) | Dhacdo
Home Wararka Maanta Nin qarax waday oo lagu qabtay Magaalada Dhuusamareeb (SAWIRRO)
Nin qarax waday oo lagu qabtay Magaalada Dhuusamareeb (SAWIRRO)
Ciidanka Nabad Suggida Galmudug ayaa xalay fashiliyay qarax, ay nabadiidka doonayeen inay ka gaystaan Magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Maamulka Galmudug, ka dib markii ay ku soo wargeliyeen dadka deegaanka.
Nin dhalinyaro ah oo qaraxaasi waday ayaa damcay in uu geliyo meel ku dhow koley qaadka lagu iibiyo, gudaha Magaalada Dhuusamareeb. Haween goobtaasi ka ag-dhawaa ayaana ku wargeliyay hay’adaha ammaanka.
Xoogaga Nabad Suggida oo halkaasi gaaray ayaa ku guuleystay inay gacanta ku soo dhigaan ninkaasi iyo qaraxii uu doonaayayba inuu amniga ku qalqalgeliyo.
Ciidanka ayaa sidoo kale kala fur furay qaraxaasi, oo lagu soo qariyay daasad/gasac, iyagoona saddex qaybood u kala saaray. Ciidanka ayaa muuqaalo ay qaraxaasi ka qaadeen la wadaagay Warbaahinta.
Taliyaha Nabad Suggida ee Magaalada Dhuusamareeb, Qooje Yare ayaa dadka deegaanka kaga mahadceliyay wada-shaqayntooda. Taliyaha ayaa xusay in ay gacanta ku hayaan ninkii qaraxa waday.
Tan iyo markii uu xilka qabtay Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) ayaa waxaa dhawr jeer Magaalada Dhuusamareeb iyo nawaaxigeedaba ka dhacay qaraxyo, ay soo maleygeen maleeshiyada Al Shabaab.
Magaalada Dhuusamareeb ayaa ka caaganeyd falalka amni-darrada, ee Shabaabku ka wadaan dalka, mudadii laba iyo tobanka sano ahayd, ay Ahlu Sunna ka arrimineysay Gobolada Dhexe.
Previous articleMaxaa looga baahan yahay Dowladda Federaalka, ka dib xiisadda siyaasadeed ee dalka ku soo korortay?
Next articleDagaal culus oo dib uga qarxay Gobolka Tigreyga iyo duqayn ku bilaabatay Mekelle